Ikozvino yave kuwanikwa paApple TV + zvikamu zvekutanga zvitatu zvePhysical series | Ndinobva mac
Iye zvino yave kuwanikwa paApple TV + zvikamu zvitatu zvekutanga zvePanyama zvakateedzana
Imwe zvakare Chishanu, Apple yekushambadzira vhidhiyo sevhisi inowedzera zvitsva zvemukati zvemukati Pane ino chiitiko, tinotaura nezve zvakateedzana chisimba, akateedzana akaiswa muCalifornia muma80s uye umo protagonist yedu, Sheila Rubin (akatamba naRosy Byrne) anowana kwake kwehupenyu mueerobics.
Apple yakaburitsa zvikamu zvitatu zvekutanga zvemumhanzi uyu mwaka wayo wekutanga une zvikamu gumi zvinopfuura hafu yeawa kureba. Mukuwedzera kuna Rosy Byrne, tinowanawo Rory Scovel mune basa raDanny (murume waSheila), Dierdre Friel, Paul Sparks naDella Saba. Shure kweiyi nhepfenyuro ndiAnnie Weisman.
Mukutsanangurwa kwenyaya dzino, tinogona kuverenga:
Sheila Rubin mukadzi anozviisa pasi anonetswa nemadhimoni ake ari kunetsekana kusvika muCalifornia yema80. Achitungamirirwa nezwi remukati rinotsvinya, iye achawana budiriro nekusunungurwa kuburikidza nenzira isingatarisirwi: maekisesaizi.
Kuti abude murima iro muchato wake urimo, anoitisa maekisesaizi, asi haasununguke zvizere kusvikira awana nzira yekusanganisa yako nyowani shungu yekurovedza muviri ine burgeoning videotape tekinoroji kugadzira bhizimusi rekuchinja uye kuve mukadzi echikadzi mararamiro eiyo nguva.
Rosy Byrne mutambi wemakore makumi mana nemaviri ekuberekwa muAustralia, Vaviri-nguva Emmy Mubayiro anosarudzwa yezvakateedzana Kukuvadza, dzakateedzana umo Glenn Close naTed Danson vakapindawo.
Uyewo akatora chikamu mumabhaisikopo Insidious, Muchato weshamwari yangu yepamwoyo, Damn vavakidzani, X-Varume: Apocalypse, X-Varume: Kutanga Gen...
Zvimwe zvikamu zvese zviri chikamu chemwaka wekutanga inotanga kuratidzwa vhiki nevhiki Chishanu chega chega.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Noticias » Iye zvino yave kuwanikwa paApple TV + zvikamu zvitatu zvekutanga zvePanyama zvakateedzana
Sekureva kwaGartner, kushomeka kwepasi rese kwemachips kunogara kusvika kupera kwa2022